Bit By Bit - imifuniselo Running - 4.5.3 Yakha yakho imveliso
Ukwakha umkhiqizo wakho yindlela ephezulu yokubeka ingozi, indlela ephezulu yokuvuza. Kodwa, ukuba kusebenza, unokuzuza kwi-loop ye-positive feedback eyenza uphando oluthile.
Ukuthatha indlela yokwakha yakho inzame enye, abaphandi ngokwenene bakhela iimveliso zabo. Ezi mveliso zikhangela abasebenzisi kwaye zikhonza njengamaqonga ovavanyo kunye nezinye iintlobo zophando. Ngokomzekelo, iqela labaphandi kwiYunivesithi yaseMinnesota lenze i-MovieLens, enika iingcebiso ze-movie ezizimeleyo, ezingekho phantsi kwezoqoqosho. I-MovieLens isebenze ngokuqhubekayo ukususela ngo-1997, kwaye ngeli xesha aba-250,000 abasebenzisi ababhalisiweyo baye banikezela izigidi ezingaphezu kwezi-20 zee-movie (Harper and Konstan 2015) . I-MovieLens isetyenzisile uluntu olusebenzayo lwabasebenzisi ukuba baqhube uphando olunzulu oluvela ekuvavanyeni iingcamango zenzululwazi zentlalo malunga negalelo kwimpahla yoluntu (Beenen et al. 2004; Cosley et al. 2005; Chen et al. 2010; Ren et al. 2012) Iingxaki ze-algorithm kwiinkqubo zengcebiso (Rashid et al. 2002; Drenner et al. 2006; Harper, Sen, and Frankowski 2007; Ekstrand et al. 2015) . Uninzi lwale mvavanyo aluyi kuba nako ngaphandle kwabaphandi abanokulawula ngokupheleleyo kwimveliso yokusebenza yangempela.
Ngelishwa, ukwakha imveliso yakho kunzima kakhulu, kwaye kufuneka ucinge ngako njengokudala inkampani yokuqalisa: ingozi enkulu, umvuzo ophezulu. Ukuba uphumelele, le ndlela inika ulawulo oluninzi oluvela ekuzakheleni kwakho uvavanyo kunye nabathathi-nxaxheba abavela ekusebenzeni kwiinkqubo ezikhoyo. Ukongezelela, le ndlela inokukwazi ukudala i-loop feedback impendulo apho uphando olongezelelweyo lukhokelela kwimveliso engcono ekhokelela kubasebenzisi abaninzi abakhokelela kubaphandi abaninzi kunye nokunye (umzekeliso 4.16). Ngamanye amazwi, ngokukhawuleza i-loop ye-feedback impendulo, uphando kufuneka lube lula kwaye lube lula. Nangona le ndlela inzima kakhulu ngoku, ithemba lam kukuba liza kuba luncedo ngakumbi njengoko iteknoloji iphucula. Kuze kube ngoko, nangona kunjalo, ukuba umphandi ufuna ukulawula umkhiqizo, isicwangciso esicacileyo ngakumbi ukusebenzisana nenkampani, nesihloko ndiya kuphendula ngokulandelayo.
Umzekeliso 4.16: Ukuba unokwenza ngempumelelo umkhiqizo wakho, unokufumana inzuzo ye-loop feedback: uphando lukhokelela kwimveliso engcono, ekhokelela kubasebenzisi abangaphezulu, okukhokelela kuphando olungakumbi. Ezi ntlobo zeempendulo zengxelo zikhangeleka kunzima ukudala, kodwa zinokukwenza uphando olungenakwenzeka ngenye indlela. I-MovieLens ngumzekelo weprojekthi yophando eye yaphumelela ekudaleni i-loop feedback feedback (Harper and Konstan 2015) .